Entertainment Archives - Page3of 25 - Baganthar
Bagan Thar Sep 23
“ရွှေမလိုပါ၊ ငွေမလိုပါ” လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၃၀ လောက်ကပါ။ ကျွန်တော်တို့ လမ်းထဲက မိန်းမကြီးတစ်ယောက်ဟာ အိမ်နီးချင်းတွေကို ခုလို ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ ‘သားကြီးက ဂျပန်မှာ အလုပ်နေတယ်။ သားလတ်က အမေရိကားမှာ ကျောင်းတက်နေတယ် သားငယ်က ယိုးဒယားမှာ အလုပ်နေတယ်လေ။ သမီးနဲ့ သားမက်ကလည်း စင်္ကာပူမှာ PR (အမြဲတမ်းနေခွင့်) နဲ့ နေနေကြတယ်’။ တကယ်လည်း အဲဒီအတိုင်း မှန်ပါတယ်။ သူ့မှာ သားသမီးတွေ ပို့ပေးတဲ့ ငွေ၊ ...
မင်းဒင်ရဲ့ သက်ခိုင် အပိုင်း (၁၀၀) – မောင်ဝိတ်နှင့် အတုံ့အလှည့် (ဒုတိယပိုင်း)
Bagan Thar Sep 21
မင်းဒင်ရဲ့ သက်ခိုင် အပိုင်း (၁၀၀) – မောင်ဝိတ်နှင့် အတုံ့အလှည့် (ဒုတိယပိုင်း) ရေးသားသူ – မင်းဒင် ကျွန်တော် မောင်ဝိတ်ကိစ္စတွေ လိုက်ရှင်းနေတဲ့ တချိန်တည်းမှာပဲ ကျွန်တော်ဟာ စီကူးမား၊ တရားစွဲတဲ့ အမူကိုလည်း လိုက်ရှင်းနေရပါတယ်။ စီကူးမား ကျွန်တော့်ကို တရားစွဲတဲ့ အမူခေါင်းစဉ်က ကုမ္မဏီဆိုင်းဘုတ်ကို နာမည်ပြောင်းတဲ့ အမူတဲ့ဗျာ။ တကယ်တော့ ကုမ္မဏီရဲ့ရှယ်ယာ ကိုးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းဟာ ကျွန်တော်ပိုင်တာမို့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ တရားမစွဲနိုင်ပေမယ့် တရားဥပဒေမရှိတော့သလို ဖြစ်နေတဲ့ ...
မင်းဒင်ရဲ့ သက်ခိုင် အပိုင်း (၁၀၀) – မောင်ဝိတ် နှင့် အတုံ့အလှည့် (ပထမပိုင်း)
မင်းဒင်ရဲ့ သက်ခိုင် အပိုင်း (၁၀၀) – မောင်ဝိတ်နှင့် အတုံ့အလှည့် (ပထမပိုင်း) ရေးသားသူ – မင်းဒင် ထိုနေ့ကား ကျွန်တော် စခန်းခွဲသို့ ပြန်ရမည့်နေ့ ဖြစ်ပါသည်။ ကိုသက်ခိုင်ကား ပင်မစခန်းတွင် သက်သာ ဈေးဆိုင်ခန်းများ ဆောက်လုပ်ရေး စခန်းအတွက် လျှပ်စစ် ထရန်စဖော်မာ ရရှိရေးတို့အတွက် အလုပ်မအား လပ်သည့်ကြားက ကျွန်တော့်ကို ပင်မစခန်းသို့ လိုက်ပို့မည်ဟု ဆိုသည်။ မိုးအကုန် ဆောင်းအကူး ဖြစ်သော်ငြား ကုန်းလမ်းဖုန်ဖုန် ...
ဗိုလ်တွေပြုတ်ရင် ဘာလုပ်သလဲဆိုတာ (စာရေးဆရာ မောင်သော်က၏ သရော်စာ)
Bagan Thar Sep 20
” စာရေးဆရာ မောင်သော်က၏သရော်စာ ” တရံရောအခါက တပ်က အရာရှိ တော်တော်များများ အမှုတွဲတစ်ခုကို အရင်းပြုပြီး အလုပ်က ပြုတ်ပါလေရော။ အဲဒီထဲမှာ ဗိုလ်ကြီးတစ်ယောက်လည်း ပါတယ်။ ဗိုလ်များ ပြုတ်ပြီဆိုရင် အပြင်မှာ ဘာမှ လုပ်စားတတ်တာမှ မဟုတ်ပဲဗျ။ တနေ့တနေ့ အိမ်မှာချည်းဘဲ ထိုင်နေတော့ တာကိုး။ အိမ်က မိန်းမကလည်း အရင်ကတော့ အရာရှိကတော် ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ မြောက်ကြွမြောက်ကြွ လုပ်နေရတုန်းက ကိုကို ရဲ့ မောင်မောင်ရဲ့နဲ့ ...
ထန်းလျက်ခဲကို လွှတ်လိုက်ပါ – မိုးခတ်(ဒေးဒရဲ)
Bagan Thar Aug 18
ထန်းလျက်ခဲကို လွှတ်လိုက်ပါ – မိုးခတ်(ဒေးဒရဲ) လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း နှစ်ထောင်ကျော်က ဂရိမြို့ပြနိုင်ငံ အေသင်မြို့၏ဈေးတစ်ခုတွင် အရောင်မှေးမှိန်သော အဝတ်အစားတို့ကို ဝတ်ဆင်ထားသည့် လူတစ်ယောက်သည် ဆိုင်တန်းတို့၌ ပြသချိတ်ဆွဲထားသော ပစ္စည်းများကို တစ်ခုချင်းစီလိုက်၍ ငေးကြည့်နေလေသည်။ ထိုသူအားမြင်သော ဘေးနားမှ လူတစ်ယောက်သည် “ဘာများအလိုရှိ၍ ကြည့်နေပါသလဲ”ဟု မေးလေသည်။ ထိုအခါ “လူတွေအတွက် တကယ်လိုအပ်မယ့် ပစ္စည်းများရှိမလားလို့ ကြည့်နေ တာပါ”ဟု ပြန်ဖြေလေသည်။ ထိုအဖြေရှင်မှာ ဂရိအတွေးအခေါ်ပညာရှင်ကြီး ‘ဆိုကရေးတီး (ဘီစီ ၄၆၉-၃၉၉)’ဖြစ်လေသည်။ ...
“ပစ်မှတ်” – ကျွန်ဘဝမှာပဲ ပျော်တဲ့ ကျွန်တွေ ဖြစ်ချင်နေကြတုန်းပဲလား? (မင်းဒင်)
Bagan Thar Aug 08
“ပစ်မှတ်” အေဗရာဟင်လင်ကွန်းဟာ(၁၈၆၀)ခုနှစ်မှာ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ရဲ့သမ္မတအဖြစ်အရွေးခံရပါတယ်။ လင်ကွန်းဟာကျွန်စနစ်ဖျက်သိမ်း ရေးအတွက်ကျွန်စနစ်ဟာတရားမဝင်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဒီမှာ တင်ကျွန်စနစ်ကိုဆက်လက်တည်မြဲစေလိုတဲ့၊ပြည်နယ်တချို့ကထကြွ ပုန်ကန်ပြီး၊အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးဖြစ်ခဲ့တာပါပဲ။ (၁၈၆၀)ခုနှစ်တုန်းက၊ အမေရိကန်မှာပြည်နယ်ပေါင်း(၃၃)ခုရှိတဲ့အနက် ပြည်နယ်ငါးခုကသာ၊ ကျွန်စနစ်ကိုဆက်လက်ထားရှိချင်ကြတာပါ။ အမေ ရိကန်ပြည်တွင်းစစ်ဟာ၊(၁၈၆၁)ခုနှစ်ကနေ(၁၈၆၅)ခုနှစ်အထိ၊ ငါးနှစ်နီး ပါးကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲကြီးတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ နှစ် ဖက်စလုံးဟာအမေရိကန်တွေချည်းပါပဲ။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တွေးမိတဲ့အချက်ကတော့၊ ကျွန်စနစ်ကိုဖျက်သိမ်း ဖို့သဘောတူတဲ့ပြည်နယ်တွေထဲမှာလည်း ကျွန်ပိုင်ရှင်တွေရှိကြတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့်အဲဒီကျွန်ပိုင်ရှင်တွေဟာ၊ ကျွန်စနစ်ဖျက်သိမ်းရေးကို သဘောတူလက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ ထို့အတူကျွန်စနစ်ကို ဆက်လက်ထားရှိလိုတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာရှိတဲ့ကျွန် ပိုင်ရှင်တချို့ဟာလည်း၊ ကျွန်စနစ်တည်မြဲရေးအတွက်ဝင်မတိုက်ခဲ့ကြပါဘူး။ ဒါကြောင့်ကျွန်စနစ်တည်မြဲစေလိုတဲ့ ကျွန်ပိုင်ရှင်အရေအတွက် ဟာများလှတယ်မဆိုနိုင်ပါဘူး။ လက်တစ်ဆုတ်စာပဲရှိပါတယ်။ ...
“လူတွေဟာ ခက်တယ်” (မင်းကိုနိုင်)
Bagan Thar Aug 07
“ ဟဲ့ ကောင်လေး လာစမ်း။ နင့်ကို ငါ အလုပ်အပ်စရာ ရှိလို့ ” တနေ့သ၌ …ကျွန်တော်တို့ ကလေးတစ်သိုက် ဂေါ်လီရိုက်နေစဉ် ဒေါ်ကြီးက ကျွန်တော့်အား လက်တို့ ခေါ်၍ သူ့ဆိုင်သို့ လိုက် သွားရပါ၏။ ဒေါ်ကြီးဆိုသူမှာ ကျွန်တော်တို့ ရပ်ကွက်၏ မုန့်ဆိုင်ကလေး ဖွင့် ထားပြီး သူ့သားသမီးများစွာကို ရှာဖွေကျွေးမွေးနေရသူ ဖြစ်ပါ သည်။ သူက ထင်းရူးပြားတစ်ချပ် ယူပြပြီး ကျွန်တော့်အား “ ...
“မမြင်ရသည့်တိုင် လှနေမှာပါလို့” (မင်းကိုနိုင်)
Bagan Thar Aug 06
ကျနော် သင်္ဃန်းကျွန်း အ.ထ.က(၁)၌ ကျောင်းတက်စဉ် အခန်းလွတ်တစ်ခုကို သတိထား မိသည်။ ထိုအခန်းအနီး ရောက်လျှင်ကျောင်းသားများ ပခုံးတွန့်ကာ သုတ်ခြေတင်လေ့ ရှိစမြဲ။ မကြည့်ပဲ လည်းမနေနိုင်။ အမြဲပိတ်ထားသော ထို အခန်းတွင်းသို့ မှန်ပေါက်မှ တဆင့် မဝံ့မရဲချောင်းကြည့်ကာ နာနာဘာဝတွေ့သလိုလို တစ်စုံတစ်ရာပဲအထဲမှ ခြောက်လှန့် နေသလိုလို ကျောင်းတွင်းနာမည်ကြီး နေသည့်ထိုအခန်း။ ၁၉၅၀ ကျော် ၁၉၆၀ ကာလများက အခြေခံပညာအထက်တန်း ကျောင်းများ၌ ဇီဝဗေဒ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒအတွက် ...
“အရူးကြားထဲမှာ အရူးမဖြစ်​​စေဖို့” – ရှေးပညာရှိများက အများမိုးခါး​ရေ​သောက်​တိုင်း…
Bagan Thar Aug 02
အရူးကြားထဲမှာ အရူးမဖြစ်​​စေဖို့ (ပုံပြင်) ရှေးပညာရှိများက အများမိုးခါး​ရေ​သောက်​တိုင်း ကိုယ်​ပါလိုက်​မ​သောက်​နဲ့လို့… ဆိုဆုံးမခဲ့ကြတာဖူးတယ်… ရှေးအခါတုန်က တိုင်းပြည်​တစ်​ပြည်​မှာ မိုး​ခေါင်​​ရေရှားဖြစ်​ကာ ​ရေအလွန်​ရှားပါး​သော အချိန်​ဖြစ်​​လေ၏။ ထိုအခါ ပညာရှိသုခမိန်​အမတ်​ကြီးမှ…. မှန်​လှပါ အရှင်​မင်းကြီးဘုရား…. တိုင်းပြည်​မှာ မိုး​ခေါင်​​ရေရှားဖြစ်​​နေပါသည်​။ သို့ပါ​သော်​လည်း မနက်​ဖြန်​​နေမွန်းတည့်​ချိန်​မှစ၍ မိုးကြီး​လေကြီးရွာသွန်းပါလိမ့်​မယ်​ဘုရား….” “အင်း ကြားရတာဝမ်းသာအားရ ရှိ​တော်​မူ လိုက်​တာကွယ်​….” “ဒါ​ပေမယ့်​လည်း…ထိုမိုး​ရေဟာ အချိန်​အခါ မဟုတ်​ရွာသွန်း​သော မိုး​ရေဖြစ်​ပါသဖြင့်​ ​ သောက်​သုံး​သောသူကို အဆိပ်​သင့်​နိုင်​​ကြောင်းပါဘုရား…. “​ဟေ…! ဒါဆိုဘယ်​လိုလုပ်​ကြမတုန်း အမတ်​ကြီးရဲ့” ...
“အရည်အချင်းတွေ ဆိုတာ သူ့နေရာ သူမှန်မှသာ အသုံးဝင်လေ့ ရှိပါတယ်” (အကောင်းဆုံး ဥပမာပုံပြင်)
Bagan Thar Aug 01
ကုလားအုပ် ကလေးက ကုလားအုပ် အမေကြီးကို မေးတယ်။ “မေမေ မေမေ! သားတို့ ကျောမှာ ဘုကြီး ပါနေတာ ဘာလို့လဲ မေမေ!” ကုလားအုပ် အမေကြီးက ရှင်းပြတယ်။ “အဲ့ဒါကြီးက အစာ နဲ့ ရေ သိုလှောင်တာ ငါ့သားရဲ့။ ကန္တာရထဲမှာ အစာရှာမရပဲ ရက်ရှည်လများ ခရီး သွားရရင် အစာခံနိုင်အောင်ပေါ့ကွယ်” ကုလားအုပ်ကလေး – အော်……. တအောင့်နေတော့ ကုလားအုပ်ကလေး ထပ်မေးပြန်တယ်။ “မေမေ! ...